Maxuu RW Khayre ku soo arkay goobihii ay ka dhaceen Qaraxyadii shalay | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Maxuu RW Khayre ku soo arkay goobihii ay ka dhaceen Qaraxyadii shalay
Maxuu RW Khayre ku soo arkay goobihii ay ka dhaceen Qaraxyadii shalay
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali kheyre ayaa xalay kormeeray Goobihii qaraxyada khasaaraha geystay ay ka dhaceen shalay Duhuradii ee Magalada Muqdisho.
Kheyre ayaa la kulmay qaar ka mid ah askartii ku sugneyd koontorooladii ay qaraxyada ka dhaceen, isaga oo uga mahad celiyay Ciidamada sida ay uga hortageen in qaraxyadaasi lala beegsado goobihii ay Al-Shabaab la damac sanaayeen.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaraha ayaa sheegay inay hayaan Abaal marin loogu talo galay Ciidamada si loogu dhirigeliyo howsha ay u hayaan Shacbaka soomaaliyeed,waxaana uu tacsi u diray Ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay Magalada Muqdisho.
Ugu dambeyn Shacbaka Soomaaliyeed ayuu Ra’iisul Wasaare Kheyre ugu baaqay inay la Shaqeeyaan Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ee had iyo jeer u taagan sugida amniga dalka iyo Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Previous articleMaydka Askarta Kenya oo lagu daad gureeyay Wajeer
Next articleFaa Faahin: Toogasho ka dhacday Afgooye